Ukuthuthukiswa Kwasekhaya - I-Mag Engakholekiyo
Amathiphu wokuhlanza i-Vacuum yama-Premium Rugs
Ucabanga ukuthenga ama-shaggy rugs eNdiya, kepha udidekile ngokulungiswa kwawo? Funda lo mhlahlandlela ukuze wazi ukuthi ungabagcina kanjani behlanzekile. Eminyakeni embalwa edlule, amatagi ashubile eNdiya abone ukuvuseleleka. Lawa iragi anenqwaba ejulile,…
Ukulungiswa Komnyango Wegaraji Ephukile Ngokushintshwa Kwama-Roller ngochwepheshe
Ochwepheshe beGaraji Lokulungisa Umnyango waseCincinnati bangaba inketho enhle kakhulu noma ehlukile kuwe uma unenkinga ngomnyango wegaraji lakho futhi uhlala noma uhlala eCincinnati. Lokhu kungenxa yokuthi banezazi ezinikezela ngokulungiswa kwekhwalithi ephezulu /…
Ukulungisa Ukulungiswa Komnyango Wegaraji Ngabachwepheshe Beminyango Yegaraji
Ngezinga elikhulayo nokufunwa komnyango wegaraji kuwo wonke amakhaya, uColumbus uqhamuke ezoshaya okungajwayelekile. Cabanga nje ngomnyango oyeka ukusebenza phakathi nosuku. Ibhadi lingakukhawulela ekwenzeni umnyombo wakho…
Izinto Ezi-4 Ezithonya Ukufakwa Kwe-Drainfield
I-drainfield ingenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu ezenza uhlelo lwe-septic lusebenze. Ukufakwa kwe-drainfield ngokuvamile kwakuzokwenziwa ngaphansi kokuqondisa kukasonkontileka othembekile. Uma usuthathe isinqumo sokufaka i-septic system ekhaya lakho, usonkontileka uzo...
Izinkinga Zasekhishini Ezingase Zidinge Ukulungiswa Kabusha Kwekhishi
Akukho lutho olungaqhathaniswa nekhishi elihlanzekile nelihlelekile. Imema umndeni ukuthi upheke ukudla okumnandi ekhaya. Ukuba nekhishi elihle nelihlelekile kukhuthaza umndeni ukuthi weqe inqubo yawo yokudla bese upheka isidlo sakusihlwa esimnandi. Ngokuyisisekelo, ukuba ne…
Inqubo Yokuhlanzwa Kwezokwakha
by UKendall J
Abahlanzi bezentuthuko bangaguqula ngokushesha indawo yokusebenza engahlanzekile ibe yisimo esivikelekile nesihlanzekile. Inqubo yokuhlanza intuthuko ihlazeka kakhulu kunomsebenzi ojwayelekile wokuhlanza ngenxa yomqondo wokuthi izinto ezisetshenziswayo ziyaxoshwa endaweni yokusebenza kanye…
Isiqondisi Sokufaka Amaphayiphu Wendlela yokuhamba
Ukufaka ama-driveway pavers kungumsebenzi owesabekayo. Noma ngabe uhlela ukufaka izitini, ukhonkolo noma amatshe okugcoba amatshe, udinga abakhi bomgwaqo. Kunezinye izinyathelo futhi ezizokusiza ukufaka ama-driveway pavers. Uma uhlela ukuyifaka kahle, ke…
Kubuciko bokwakha, ukugqokisa noma izindonga zangaphandle, kuhloselwe ukufaka izinto zokwenziwa ngokhuni komunye ngenhloso yobuhle nokusebenza. Ukumbozwa kusetshenziswa njengomsebenzi wokulawula ukuvikela isakhiwo ezakhiweni. Izinhlobo zezinto zokubekwa eceleni zifaka izinkuni, ipulasitiki (noma…
Izici Zokubalwa Kokhonkolo
Ukuhlanganiswa ngokuvamile kuthathwa njengokugcwalisa okungaphakathi, okwenza ama-60 kuye kuma-80% ngesisindo sevolumu kakhonkolo kanye no-70 kuye ku-85% ngesisindo. Iyunithi ihlukaniswe ngezinhlobo ezimbili ezihlukene: ezimangelengele nezinhle. Okuhlanganisiwe okumaphakathi ngokuvamile kukhulu kune…
Izinzuzo Zendawo Yokubeka ye-Aluminium
Uma ufuna isitoreji sekhwalithi, sincoma ukuthi uhlole ibhokisi lesitoreji se-aluminium. Qiniseka ukuthi uthenga kongoti bakule ndawo bese usebenzisa izinto zokwakha ezisezingeni eliphakeme. Ukuthenga kumthengisi ongaziwa akuwona umqondo omuhle ngoba lokhu…